Xog : 8-Arin Oo Jaceylka Dhabta Ah Ku Muujinaya | alcarabiya.com
Home » Arimaha Qoyska » Xog : 8-Arin Oo Jaceylka Dhabta Ah Ku Muujinaya
Xog : 8-Arin Oo Jaceylka Dhabta Ah Ku Muujinaya	Sida la xuso jaceylka waxa uu leeyahay calaamado , hadaba warbixintaan kooban waxaan kugu siinayaa dhowr qodob oo jaceylka dhabta ah ka marqaati kacaya.
1- Haddii aad dooneyso in aad 24-saac aad la joogtid, kuna dareemeysid deganaan , isla markaana aadan meel uga leexaneyn.
2- Haddii aad dareento in aad dooneyso in nolosha isaga la wajahdo , garab taagnaatid , isla markaana aad ku raaxeysaneyso caawintiisa/caawinteeda
3- Marka jeclaato in aad dareento in aad dooneyso in aad ogaato heerka uu gaarsiisan yahay maseerkiis/keeda.
4- Marka aad dareento in uu jiro isu soo dhawaansho adiga iyo qoyskeeda/qoyskaada ah	5- Haddii aad dareemeyso in aad raaxo ku dareemeysid marka aad kala qeyb qaadaneyso waxa yaabaha uu ka helo/hesho sameyntooda.
6-Marka aad dareento raali aahansho waxa qofkaas dartiis aad u bixineyso oo aadan dhibsasho dareemeyn.
8- Markaa ad dareento in farxadda iyo dhoola cadeynta ay qofkaas kaga xeran tahay .
3 Responses to Xog : 8-Arin Oo Jaceylka Dhabta Ah Ku Muujinaya	mr mc Reply
August 28, 2013 at 1:05 pm	juuuuuuuuuuuz man looz
August 27, 2013 at 7:28 pm	looozl
August 27, 2013 at 6:13 pm	Ki7aad cawi